'မီ' ဇာတ်ကားတွင် ဆေးလိပ်သောက်သည့် ဇာတ်ဝင်ခန်းများ ပါသော်လည်း သံတမန်ကျင့်ဝတ် မဖောက်ဖျက်သည့်? - Yangon Media Group
‘မီ’ ဇာတ်ကားတွင် ဆေးလိပ်သောက်သည့် ဇာတ်ဝင်ခန်းများ ပါသော်လည်း သံတမန်ကျင့်ဝတ် မဖောက်ဖျက်သည့်?
‘မီ’ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွင် ဆေးလိပ် သောက်သည့် ဇာတ်ဝင်ခန်းများပါ သော်လည်း ဆေးလိပ်မသောက်ရန် တားမြစ်ချက်များ၊ဆေးလိပ်၏ဆိုးကျိုးများပြသထားပြီး သံတမန်ကျင့်ဝတ်မဖောက်ဖျက်သည့်အတွက် သရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီပိုင်ဖြိုးသုကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကျန်းမာရေးသံတမန်အဖြစ် ဆက်လက်လက်တွဲသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
အဆိုပါကိစ္စကို နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပသည့် ‘၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကျန်းမာရေးသံတမန် သရုပ် ဆောင်အကယ်ဒမီပိုင်ဖြိုးသုနှင့် မီဒီယာများတွေ့ဆုံပွဲ’တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူးဒေါက်တာထွန်းမြင့်က ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ဆေးလိပ်နဲ့ဆေးရွက်ကြီး ထွက်ပစ္စည်းထိန်းချုပ်ရေး ဥပဒေဆိုတာရှိပါတယ်။ ဆေးလိပ်နဲ့ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းတွင်ကျယ်စွာဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး အဲဒီလို ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ခဲ့ရင်အပြစ် မြောက်တယ်။ အဲဒီလိုမရည်ရွယ်ရင် အပြစ်မရှိဘူး။ ရည်ရွယ်ချက်အ ပေါ်မူတည်တယ်။ အားပေးရင်မရဘူး။ အသိပညာပေးတယ်ဆိုရင်ရတယ်။ သံတမန်အဖြစ် ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ သံတမန်မခန့်ခင်ကတည်းက ဒီဇာတ်ကားရိုက်ခဲ့တာပါ။ ‘မီ’က ၁၉၄၈ ခုနှစ်မတ်လလောက်မှာ ရှုမဝမဂ္ဂဇင်းမှာပါ ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၇ဝကျော်က သူ့ရဲ့ကာရိုက်တာက အဲဒီအချိန် ကဆေးလိပ်တွေက တွင်တွင်ကျယ် ကျယ်သောက်ကြတာကိုး။ ကာရိုက်တာကို ဆရာမကြီးဒေါ်ကြည် အေးကဖမ်းခဲ့တာကိုး။ ဒီစာအုပ် ရိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီကာရိုက်တာမပါလို့ ဒီကားမဖြစ်လောက်ဘူး။ ဒီ နေရာမှာ သံတမန်တွေရဲ့ကျင့်ဝတ်အရ ဒီကားရဲ့အစမှာဆေးလိပ် သောက်တာကို တားမြစ်ထားတာ တွေ့ရတယ်။ အဆုံးမှာလည်းတွေ့ရတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်သုံးတဲ့ အန္တရာယ်ပါတယ်။ ထင်ရှားတာ တော့ ပိုစတာတွေ၊လက်ကမ်းစာ စောင်တွေမှာ ဆေးလိပ်မသောက် ရေး Logo လေးထည့်ရတယ်။ဒါ ကျင့်ဝတ်နဲ့ဆိုင်တယ်။ ထည့်ထားတယ်။ ဆက်ပြီးတော့ သူနဲ့လက်တွဲပြီး တာဝန်ဝတ္တရား ၁၄ ချက် ကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်”ဟု ဒေါက်တာထွန်းမြင့်က ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကျန်းမာရေးသံတမန်ဖြစ်သော အကယ် ဒမီပိုင်ဖြိုးသုအနေဖြင့်လည်း ဆေးလိပ်၊ အရက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးကို အသုံးပြုရန်အားပေးသည့် ဇာတ်ရုပ်များကို လုံးဝရိုက်ကူးမည်မဟုတ် ကြောင်းသိရသည်။ အကယ်ဒမီပိုင်ဖြိုးသုကလည်း”အကယ်၍ ဇာတ်ကားထဲ ကဇာတ်ကောင်ဟာ မူးယစ်ဆေး ဝါးကိုအားပေးတဲ့ဇာတ်ရုပ်၊ ဆေးလိပ်သောက်တာကို အားပေးတဲ့ ဇာတ်ရုပ်၊ အရက်သောက်တာကို အားပေးတဲ့ ဇာတ်ရုပ်ဆိုရင်လုံးဝ မရိုက်ဘူး။ ဒါပေမဲ့အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပညာပေး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို တော့ သုသုတို့ဘဝမှာ ပညာပေး ရိုက်ဖို့ဆိုရင် ကားတိုင်းလိုမှာ ဥပမာ-အော်တစ်ဇင်အကြောင်းကိုပညာပေးချင်ရင် အော်တစ်ဇင် ဖြစ်နေတဲ့ကလေးကို ထည့်ရိုက်လိုက်ရတယ်။ ဒီအစာရြေ>ွပန် ကင်ဆာကို ပညာပေးရိုက်ရင် အဲဒါကိုဖြစ်စေတဲ့ဆေးလိပ်သောက်တာ၊ အရက်သောက်တာ၊ ကွမ်းစား တာတွေကို ရုပ်ရှင်ထဲမှာထည့်ပြ ရတယ်။ဒီလိုဖြစ်မယ့်သူတွေသည် ဒီလိုလုပ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြရတယ်။ ဒီလိုလုပ်ရင် သေမယ်လို့ ပြရတဲ့ဇာတ်ရုပ်မျိုးဆိုရင်တော့ သုသုက ဆက်ရိုက်သွားမှာပါ”ဟု ပြောသည်။
‘မီ’ဇာတ်ကားကို အကယ်ဒမီ ပိုင်ဖြိုးသု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကျန်းမာရေးသံတမန် မခန့်အပ်ခင်၂ဝ၁၇ ခုနှစ်ကစတင်ရိုက်ကူး ခဲ့ပြီး ဇာတ်လမ်းအဆုံးတွင် ဆေးလိပ်၊ အရက်ကြောင့် ဘဝဆုံးရှုံးရ ပုံကိုဖော်ပြထားသောဇာတ်ကား ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ငွေမက်၍ ယင်းဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦး ဖြစ်သလို ပိုင်ဖြိုးသု၏အမေလည်း ဖြစ်သည့် Victoria ရုပ်ရှင်ထုတ် လုပ်ရေးပိုင်ရှင်ဒေါက်တာနွယ်ဦး က မီဒီယာများကိုရှင်းလင်းခဲ့သည်။ ‘မီ’ဇာတ်ကားကိုကြည့်ပြီး ဆေးလိပ်သောက်ချင်စိတ်ထက် ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်စိတ်ပိုပေါက်နိုင်သည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကျန်းမာရေးဦးစီးမှူးယူဆကြောင်း နှင့်ဇာတ်ကား၏ဇာတ်ဝင်ခန်းများ၊ကြော်ငြာဘုတ်များတွင်ဆေး လိပ်သောက်ခြင်းကိုတားမြစ်သည့် အမှတ်အသားကပ်ထားခြင်း၊ ဇာတ်ကားမစတင်မီ ဆေးလိပ် သောက်ခြင်းသည်ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်ပုံကို အဆိုတော် နီနီခင်ဇော်က ပညာပေးပြောထား သောဗီဒီယိုအား ပြသခြင်းများ ဆောင်ရွက်ထားသည်။
မြဝတီမြို့တွင် မြို့ခံ ကဗျာဆရာနှစ်ဦး အမျိုးသားစာပေ (ကဗျာ)ဆု ဆုနှစ်ဆုပေးရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်